ကဆုန် လပြည့်နေ့တွင် မန္တလေး နန်းမြို့ရိုး ကျုံးထောင့် လေးထောင့်၌ ပရိတ်တရားတော် ရွတ်ဖတ်ပူဇေ?? - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်း၊ ဧပြီ ၂၇
အိမ်သုံးကြက် မွေးတံမြက်စည်း ထုတ်လုပ်ရာတွင် အဓိကအသုံးပြုရသည့် မြန်မာ ကြက်မျိုးများမှသာ ရရှိသော ကြက်လည်ဆံမွေး ကုန်ကြမ်းရှားပါးလာ သဖြင့် စစ်ကိုင်းမြို့မှ ကြက်မွေးတံ မြက်စည်း ထုတ်လုပ်သူများမှာ ကုန် ကြမ်း ကြက်မွေးဝယ်ယူရ ခက်ခဲလာသည့်အပြင် ဈေးကြီးပေးဝယ် ယူ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနေကြရ ကြောင်း သိရသည်။
ကြက်မွေးတံမြက်စည်းကို မြန် မာကြက် လည်ဆံမွေး၊ ကြက်မကိုယ်လုံးမွေးနှင့် ကြက်ဖ အမြီးမွေးများ ဖြင့် အမျိုးအစားခွဲ ထုတ်လုပ်ရောင်းချရာ ကြက်လည်ဆံမွေးဖြင့် ပြုလုပ် သည့် ကြက်မွေးတံမြက်စည်းမှာ အိမ်တွင်း ဖုန်လှည်း၊ အမှိုက်လှည်း ရာတွင် လူသုံးများပြီး ဈေးကွက်အ တွင်းရောင်းချရာတွင်လည်း ကြက် လည်ဆံမွေးတံမြက်စည်းမှာ ဈေးနှုန်း မြင့်မားသော်လည်း အရောင်းအ တွင်ကျယ်ဆုံးဖြစ်သည်။
”သင်္ကြန်မတိုင်ခင်က ကြက်ဖ လည်ဆံမွေး တစ်ပိဿာ ကျပ် ၁၇ဝဝဝ ပေးဝယ်ရတယ်။ အခုရက် ပိုင်း ကျပ် ၂ဝဝဝဝ အထိ ပေးဝယ် တာတောင် လိုသလောက် မရဘူး ဖြစ်နေတယ်။ အဓိက ကတော့ မြန်မာကြက်ဖ မွေးတဲ့သူ ရှားသွား တာကြောင့်ပါ။ ကြက်မ ကိုယ်လုံး မွေးက တစ်ပိဿာ ကျပ် ၇ဝဝဝ ပဲ ဈေးရှိတယ်”ဟု စစ်ကိုင်းမြို့ ထုံးဘို ရပ်မှ ကြက်မွေးတံမြက်စည်း ထုတ် လုပ်ရောင်းချသူ ဦးထွန်းလှက ပြောသည်။
အထက်မြန်မာပြည်တွင် ကြက် မွေးတံမြက်စည်းကို စစ်ကိုင်းမြို့ ထုံးဘိုရပ် ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် ကျွဲ ခိုးတောရွာနှင့် ဘုတလင်မြို့နယ် စိုင်းပြင်ရွာတို့မှ ထုတ်လုပ်ရောင်းချ ပြီး ကုန်ချောတံမြက်စည်းကို မန္တလေး ဈေးချိုတော်ရှိ ဖောက်သည်များထံ ပေးသွင်းကြကြောင်း ကြက်မွေးတံ မြက်စည်းရောင်းဈေးမှာ ကြက်လည် ဆံမွေး တစ်ချောင်းယခင် ကျပ် ၁၇ဝဝ၊ ယခု ကျပ် ၁၈ဝဝ၊ ကြက် ကိုယ်လုံးမွေး တံမြက်စည်းတစ် ချောင်း ကျပ် ၁၂ဝဝ နှင့် မျက်နှာ ကြက်လှဲ ကြက်အမြီးမွေး တံမြက် စည်းတစ်ချောင်း ကျပ် ၁၅ဝဝ ရောင်းဈေးရှိရာ ကြက်လည်ဆံမွေး တံမြက်စည်းအနေဖြင့် ကုန်ကြမ်း ဈေးတက်ဝယ်ရသဖြင့် တံမြက်စည်း ဈေးပါ မြင့်တက်လာကြောင်း သိရ သည်။
နှစ် ၃ဝ ကျော်အတွင်း ရေးမြို့ရှေးဟောင်း ကျုံးတော်ကြီး၌ ရေများ ခန်းနေသည့်အတွက် ရပ်ကွက်အချို?
ဆဋ္ဌမအကြိမ် တိုင်းရင်းမီဒီယာ ညီလာခံကို ဘားအံမြို့၌ သုံးရက်ကြာ ကျင်းပ
မန္တလေး-ပြင်ဦးလွင် လမ်းပိုင်းစီမံကိန်း လာမည့် ဇွန်လတွင် လမ်းချဲ့ ခြင်းနှင့် လမ်းခင်းခြင်း ?
ရန်ကုန်နှင့် မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးမှ လွဲ၍ ကျန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်များတွင် လျှပ်စစ်ရုံးသ
ရသေ့တောင်မြို့နယ် ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရှစ်တန်းကျောင်းသား တစ်ဦးသေ၊ ကလေးနှစ်ဦး ဒဏ်ရာရ